Tweedle, Twitter ahịa n'ihi na Android | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na ngwaọrụ Gam akporo nwere ngwa Twitter nke ya (na kwa, onye ọrụ gọọmentị), ndị na-ejikwa ijikwa netwọkụ mmekọrịta ha na gburugburu ebe ọrụ a na-ezutekarị otu nsogbu ma ọ bụ nsogbu ọzọ mgbe izipu ozi ma ọ bụ nyochaa ndị ndị enyi anyị bipụtara. Ezigbo ihe ọzọ nwere ike ime ka ọnọdụ a ka mma bụ Tweedle, nke bụ onye ahịa nke ndị ọzọ mepụtara na nke ahụ agaghị arụ ọrụ zuru oke iji mee ka posts na Twitter dị mfe karịa ka ọ dị na mbụ.
Tweedle bụ naanị na, ya bụ, a obere ahịa na anyị nwere ike iji jikọọ ya na netwọkụ mmekọrịta anyị na Twitter, nwee ike mechara nyochaa ihe niile na-eme na mgbidi anyị ma n'ezie, zipụ ozi site n'aka onye ahịa a na-enweghị imeghe Twitter ozugbo.
Ibudata ma wụnye Tweedle na gam akporo
Ya mere ị nwere ike ibudata na TweedleNaanị ị ga-aga ụlọ ahịa Google Play ma tinye aha onye ahịa a na nyocha ọchụchọ gị; Ozugbo ị ga-ahụ dị ka nsonaazụ Tweedle maka gam akporo; dị họrọ ya wee pịa «tinye«, Ya mere, na mgbe sekọnd ole na ole i nwere ike iji ya na gị gam akporo ngwaọrụ.
Njikọ aka na akaụntụ Twitter gị ka a ga-eji aka mee, nke na-egosi na ị ga-abanyerịrị aha nnabata na paswọọdụ dị iche (ikike nnabata); O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị mepeburu akaụntụ Twitter gị na nzere gị na otu ngwaọrụ ahụ. ebe ọ bụ Tweedle ọ gaghị achọpụta ya ya mere, a ga-enwerịrị ego anyị kpọtụrụ aha ma kwado tupu ya; mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ahụ ihuenyo nnabata izizi, ebe naanị ị ga-pịa "Pịa ebe a ịmalite", Ma ọ bụ na ndị ọzọ okwu, na ị na-emetụ obere button na-amalite ọrụ.
Ihe mbụ ị ga-achọpụta bụ interface nke Tweedle na ebe, nke kachasi na taabụ ozi 3 dị, nke bụ:
Ọ bụrụ na ịlele ogwe na-acha anụnụ anụnụ n'elu (n'elu taabụ ndị a anyị kwuru n'elu), ị nwere ike ịmasị na n'akụkụ aka ekpe elu bụ akara ngosi nke Tweedle, ma n'akụkụ nke ọzọ bụ nhọrọ maka:
Chọpụta na akaụntụ Twitter gị.
Tinye nhazi Tweedle.
Anyị chọrọ ikwu banyere ọnọdụ a n'ihi otu akụkụ na-adọrọ mmasị nke anyị jisiri ike hụ; Ogwe dị elu ebe achọtara ihe ndị ahụ edere n'elu, dị ka ihe ị nwekwara ike ịmasị n'otu WhatsApp ahụ, na-ezo aka na mpaghara ahụ n'akụkụ aka nri elu (yana ihe ndị anyị depụtara na mbụ). N'ụzọ ezi uche dị na ya, na aka ekpe aka ekpe nke WhatsApp anyị ga-ahụ akara aka gị. Ihe niile ga - eme ka ị chee, na onye nrụpụta Tweedle Ọ bụ otu ihe ahụ dị ka onye ozi ahụ anyị mere ka atụnyere ya.
Ọrụ iji rụọ ọrụ Tweedle
Banyere ihe dị iche iche iji nwee ike ịrụ ọrụ ma na-emekọrịta ihe Tweedle mgbe ejikọtara ya na profaịlụ Twitter anyị, ọ na-adị mfe ịmata ha. Ọmụmaatụ, akara ngosi ozi (ya na akara obere +) ọ ga - enyere anyị aka iziga onye ọ bụla na kọntaktị ọ bụla; Ihe niile ị ga - eme bụ imetụ akara ngosi a iji mepee interface na oghere maka mkpụrụedemede 140, nke kachasị ikike nke ozi a ga - ezigara na Twitter.
Banyere bọtịnụ nhazi na Tweedle (isi ihe atọ dị na nri aka nri), ebe anyị nwere ike nyochaa ndepụta nke ndị na-eso ụzọ, ndị anyị na-eso, ọkacha mmasị na ọnụ ọgụgụ Tweets niile anyị bipụtara, ọ bụrụhaala na anyị pịa «perfil".
N'otu nhazi ma emetụ nhọrọ «gh»Kama, anyị ga-enwe ohere iji hazie interface nke Tweedle, nke a n'ihi na anyị nwere ike ịhazi ụdị nke ogidi iji gosi, ụda ya na ọkwa, isiokwu (skins) na ọbụlagodi, tinye akaụntụ Twitter ọzọ na ọrụ a. Ikekwe nke a bụ uru ọzọ ya, ebe ọ bụ na otu onye ahịa anyị nwere ike ijikwa karịa akaụntụ Twitter ma ọ bụrụ na anyị chọrọ.
Ozi ndị ọzọ - TwiBack, gbanwee foto gị na twitter na sekọnd
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Tweedle, onye ahịa Twitter maka gam akporo
Egwuregwu MundiVideo Egwuregwu Egwuregwu Christmas